Ahoana ny fomba hanampiana ireo mpisotro toaka hamantatra ny pandemie-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Ahoana ny fomba hanampiana ireo mpisotro toaka hamahana ny areti-mandringana
Fotoana: 2020-07-10 Comment: 17
Andao hatrehana izany: ny areti-mifindra COVID-19 dia nitondra fiatraikany ara-toekarena lehibe hatrizay tsy nampoizintsika. Tonga tampoka ny orinasam-pamokarana birao, fantatray fa ny ahiahy momba ny COVID-19 no zava-dehibe amin'ny mpanjifanay.
Miaraka amin'ny traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo marika sy labiera mitarika, dia hitantsika fa tompon'andraikitra lehibe amin'ny fanohanana ireo mpanao labiera kely sy mahaleo tena. Izany no mahatonga ny ekipa natokan'ny Coff hamoaka trano fisotro misy labiera vaovao mora amin'izao fotoana izao ary manolotra serivisy fividianana vondrona kely maimaimpoana ho an'ny filan'ny tsirairay.
Raha ampitahaina amin'ny fanafanana etona nentim-paharazana, ilay vaovao trano fisotroana hafanana menaka mafana dia tsy ny safidy mahomby ihany fa koa ny fitaovana sosialy fandidiana mora. Ny labiera dia novolavolain'i Coff tamin'ny taona 2018 ary nandefa taranaka faha-3 any Etazonia izy izao.
Manantena izahay fa hanampy ny hetsika ataonay, handefa fanadihadiana ihany koa izahay handrefesana ny fiatraikany amin'ireo mpamaky labiera kely any Shina ary hametraka vahaolana avy eo. Clike Eto araho izahay ao amin'ny Facebook hahitanao hetsika mahaliana kokoa, na mifandraisa aminay amin'ny alalàn'ny aaron@nbcoff.com .
Previous: Tsy afaka mampiato ny baikon'ny mpanjifa ny Novel Coronavirus
Next: Fomba famokarana ho an'ny baiko any Japon